Trevo Company Limited မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ | MyJobs
လုပ်ငန်းကဏ္ဍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း
အကြောင်း Trevo Company Limited
5 Jobs Found at Trevo Company Limited
• Data Entry in cash book and Prepare journal. • Handle Cash Issue. . Handle Costing • Daily ...
စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအား ကောင်းမွန်စွာ ပြုပြင်နိုင်ရမည်။ ဘတ်ဟိုး ၊ ကလပ် ၊ ဖော့ကလစ် နှင့် ကား ပြု ...
Chief Account analyze every day financial activities and provide advice and guidance to upper m ...
A Personal Assistant (PA) works with senior staff to provide one-to-one support. Typically PAs s ...
Deputy Chief Engineer Civil (RSE Licensed)
စက်ရုံအသစ်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ဖြစ်သည်။ Project ပြီးသည်အထိ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။